"Kwakungeke kusize ngalutho ukwesula" - Ilanga News
Home Izindaba “Kwakungeke kusize ngalutho ukwesula”
“Kwakungeke kusize ngalutho ukwesula”
URamaphosa uyaqhubeka nokwethula ubufakazi namuhla
AKESULANGA kwesokuba yisekela likame-ngameli wezwe ngesikhathi sokuqhwagwa kwamandla ombuso yidlanzana ngoba wayengaboni ukuthi kuzosiza ngani lokho uMengameli Cyril Ramaphosa.
Lokhu ukusho izolo ngoLwesi-thathu ngesikhathi ethula ubufa-kazi esigcawini esiphenya ngoku-qhwagwa kwamandla ombuso, esiholwa ngumahluleli, uMnu Raymond Zondo, wagcizelela ngokuthi lo mkhuba wawungeke uqedwe wukusula ezikhundleni kwalabo ababengahambisani nawo.
Uthi ukwesula kwababengasabisani nalo mkhuba, babezovula intuba enkulu yokuba labo ababenza inkohlakalo, bagcakagce.
Utshele isigcawu ukuthi ngaleso sikhathi wayengakhetha okuko-dwa kokune ayengakwenza, uku-khombisa ukuthi akahambisani nokuqhwagwa kwamandla ombuso yidlanzana, kodwa zonke lezi zindlela zazinobungozi.
Phakathi kwazo uthi kwakunga-ba wukuqhubeka esikhundleni ayekusona, wukuphikisana nokwa-kwenzeka ngethemba lokuthi isimo sizoshintsha athi wakubona kuyiyona ndlela eyayiphephile kuyena.
“Noma ngibheka manje, ngiya-kholwa wukuthi kwakuyindlela elungile ngaleso sikhathi. Ngiyakholwa wukuthi indlela
engabhekana ngayo naleso simo, ishintshe izinto eziningi ezweni, ikakhulukazi eminyakeni emitha-thu edlule, ukuhlanganisa nakho ukuphazamisa ukuqhwagwa kwamandla ombuso nokwakha kabusha isithunzi sezinhlaka ezasezifadalele,” kusho umengameli.
Uthi ukulwa ngqo nalesi sihlava kwakuzodala izinkinga eziningi futhi kwakuzogcina kuholela ekutheni axoshwe naye esikhu-ndleni ngaleso sikhathi.
“Noma babebaningi ababeyo-ngihalalisela ngalokho, kodwa ukusula kwakuzonginqanda ekutheni ngikwazi ukwenza lokhu esengikwazile ukukwenza ekutheni kuphele nya ngalesi sihlava,” kusho yena.
Uthi uyakholwa wukuthi noma ngabe wazama ukubonisana nababebona ngasolinye naye ukuba bavele basule bonke, lokho kwakuzonika izikhohlakali ama-ndla.
Uveze ukuthi ngaleso sikha-thi wayenqindeke amandla ukuthi angakhuluma noma enze izinto noma yikanjani ngoba yena waye-yisekela likaMnu Jacob Zuma.
“Ukukhuluma kakhulu nokulwa kakhulu kwakuzoholela ekutheni kwamina ngigcine ngixoshiwe, lokho kwakuzoba nomthelela ofanayo ukube ngangesulile, okwakuzokwenza ngingakwazi ukuba nesandla ekutheni kube noshi-ntsho,” kusho yena.
Uthi ukuhambisana nezikho-hlakali lezo ezaziqhwaga amandla ombuso, kwakuyinto angeke akwazi ukuyenza.
UMnu Ramaphosa uyaqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe
Previous articleIsasasa ngomdlalo wamaciko webhola
Next articleUmfelokazi ufele izimbuzi zomcimbi